ISTICMAAL "STANLEY" ("STANLEY"): SHARAXAAD KA DUWAN NOOCYADA, XEERARKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - BEERTA
Si goosashadii wanaagsan ee plomme, waxaad u baahan tahay inaad doorato noocyada saxda ah. Waxaa jira noocyo badan oo noocyo xiiso iyo caan ah.
Mid ka mid ah waa Stanley Plum ("Stanley") - Faahfaahin faahfaahsan oo kala duwan oo kala duwan, iyo sidoo kale asaasiga ah ee sii kordhaya Waxaad ka heli doontaa buuggan.
Taariikhda noocyada kala duwan ee tubta dhirta "Stanley"
Fasalka "Stanley" waxay ka timid Maraykanka. Bilowgii qarnigii 20aad, professor Richard Wellington wuxuu ka gudbay Faransiiska Pryuno Dagen iyo American Grand Duke. Sanadkii 1926, natiijada taranta, noocyada kala duwan ee "Stanley" ayaa u muuqday. Noocyada "Stanley" waxay ka heleen dhadhan aad u fiican oo ka soo baxa Faransiiska, iyo iskahorimaadka lagu keydiyo burooyinkeeda ubaxa ee kala duwan ee Maraykanka. Ruushka, kala duwanaanshaha Stanley waxaa loo keenay diiwaanka Gobolka 1983. Kala duwanaanta noocaan ah ayaa caan ku ah adduunka oo idil. Waa "Stanley" inta badan loo isticmaalo wax soo saarka.
Ma taqaanaa? Roobku ma aha geed dheer oo nool. Nolosha noloshiisa waa 15 - 60 sano.
Waa maxay "tube" Stanley?
geedku wuxuu gaari karaa dherer ilaa saddex mitir. Crohn la'aan, waxay leedahay qaab isku dhafan. Googo toosan, mugdi madow;
Caleemaha waa casaan-guduud midab leh, iyada oo aan lahayn hoos-u-dhac, waxay leeyihiin dhif iyo naadir;
caleemaha waa dhexdhexaad, wareegsan, leh caarada fiiqan. Waxay yihiin midab cagaaran oo midab leh, mid yar oo dheel ah oo leh muuqaal dabacsan;
Blooms "Stanley" ku dhawaad ​​bartamaha Abriil;
ubax cad, dhererkeedu yahay 3 cm.
miraha ugu horreeya waxay ka muuqdaan sanadka afaraad ee nolosha;
midhaha waa weyn, mugdi madow oo leh dufan dhogor. Qaababka uurjiifku waa ciribtirka, wuxuu leeyahay cirridka caloosha oo caan ah;
maqaarka miro waa dhuuban, si liidata uga soocaan saxarka;
saxarada ayaa ah cagaar-cagaaran, kareysa iyo macaan;
dhagxaanta foomka calaamadaysan, waxay leedahay dusha sare, oo si fiican uga soocaya saxarka;
Stanley wuxuu jecel yahay carrada bacrin ah. U baahan yahay quudin joogto ah;
loo tixgeliyo inay tahay jiilaalka-adag, u dulqaadan karaa dhaxan hoos u -34 ° C;
caabbinta abaarta waa mid hooseeya. Maqnaanshaha waraabka ayaa lumin kara miro;
dhalidda sare ee Stanley. Waxay si joogto ah u siisaa miraha. Qiyaas ahaan 60 kg oo miro ah ayaa laga goyn karaa hal geed.
Iyadoo la tixgelinayo dhamaan sifooyinka kala duwan ee tubaakada Stanley, mid ayaa ka soo bixi kara gunnooyinka ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka.
dhadhan fiican, macaan, tayo sare leh;
universality of meel u socota midhaha;
gaadiidka miro wanaagsan.
saameeyeen cayayaanka iyo cudurrada fangasta;
dalbashada ciidda bacrin ah;
Xeerarka dhirta loogu talagalay stenley plum stenley
Ka hor intaan la beeriin noocyada kala duwan ee Stanley tube, waxaa lagama maarmaan ah in la baro xeerarka qaar ka mid ah sii kordhaya iyo daryeelka geed dheeraadka ah.
Taariikhaha iyo xulashada meeleeynta
Noocyada tubta "Stanley" waxay ka fiican tahay in la beero guga, ka hor inta socodka dheecaan. Marka laga beerto dalagyada xilliga dayrta waxay qaadataa inay sii xumaato. Goobta beeritaanka "Stanley" waa inay ahaato qorax iyo si fiican looga ilaaliyo dabaysha. Kala duwanaanta noocaan ah waxay jecel yihiin qoyaan, laakiin ma u dulqaadanayaan biyaha taagan. Sidaa daraadeed, beerashada dooxada dooxada laguma talinayo. Dalaggu aad ayuu ugu baahan yahay bacriminta ciidda. Wixii beerto geed geedka ku haboon, waxoogaa alkaliin ama sanduuqa dhexdhexaad ah. Haddii ciidda uu yahay acidic, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo liming. Aagga beeritaanka tubta "Stanley" waa inay ahaataa ugu yaraan 9 mitir oo laba jibbaaran.
Waa muhiim! Meelaha biyaha dhulka ku dhow yihiin, waxaa lagu talinayaa in la saaro lakabka lebiska hoose ee ceelka beeritaanka. Waxay ka caawin doontaa xididdada yaryar si ay u koraan dhinacyada oo ay uga ilaaliyaan in ay qoyaan iyo qoyaan.
Diyaarinta goobta iyo geedo beeritaanka
Wixii geedo laga beero iyo daryeel dheeraad ah oo loogu talagalay plomme u baahan tahay si habboon u diyaariyaan goobta. Sidaas darteed ciidda waxay leedahay waqti ay ku degaan, diyaarinta dalool soo degtey wuxuu bilaabmayaa dayrta, ka hor dhaxan ugu horeysay.
Diyaarinta ceelku waxay ku xiran tahay sida bacrin ah ciidda uu yahay. Haddii ciidda lagu beerayo Stanly Plum waa mid bacrin ah, ka dibna godta waa inay ahaataa 80 cm dhexroor iyo 60 cm qoto dheer, lakabka ugu sareeya ee ciidda waa in laga saaraa oo lagu qasi karaa humus, fiirinta 1: 1 saamigeeda Hadda waa in lagu shubo dalool beerto leh tuulo tuulo hoose.
Haddii ciidda beeritaanka ma aha mid bacrin ah, qoto dheer ee ceelkii wareega iyo dhexroorka waa inay noqdaan 100 cm. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ka saarto cawska, ku jar oo ku dar laba baaldiyo digada iyo weel litir ah oo ash. Isku daridkan waxaa la dhigayaa meesha hoose ee ceelka. Kadibna waxay ka qaadaan carrada bacrin ah meel kale oo ay ka buuxaan tuulo ilaa qiyaas ahaan nus.
Ka hor inta aadan beeritaanka qiiqa "Stanley" waxaad u baahan tahay inaad si wanaagsan u eegto xididdadiisa. Burburin iyo qalalan ayaa laga saaray. Geedo Krona ayaa gooyay hal saddexaad, taas oo kicinaysa horumarinteeda.
Habka of beerto geedo yar yar
Beerto geedo yar yar ee noocyada tubta "Stanley" tiknoolajiyadda gaarka ah uma baahna. Degitaanka waxaa loo fuliyaa sida waafaqsan xeerarka guud:
Qeybta hoose ee ceelka soo degayaa waxay u baahanyihiin in ay wadaan garab taageera. Heerkuna wuxuu noqon karaa sida sare ee taageerada uu ka yar yahay caleemaha dambe ee geedka yar yar.
Pit si fiican u daadi biyo.
Dhalinyaro dhalinyaro ah ayaa la dhigayaa meel u dhow taageerada iyo taageeridda.
Roots waxay u qaybiyaan tuulada hareeraheeda waxayna ku dhacaan dhulka oo ay ku tumanayaan.
Laga soo bilaabo jirid soo celineysa 50 cm iyo hareeraha qajiyoobka ah. Saddex baaldiyo oo biyo ah ayaa lagu shubay.
Mulch Pristvolny peat circle ama compost.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la raaco meesha ay ku yaallaan dabka xididka. Waa inay ahaato saddex farood oo dhulka kor ku xusan.
Shuruudaha daryeelka xilliyeedka ee plomme "Stanley"
Daryeelka noocyada tubta "Stanley" waxay ubaahan yihiin sanadka oo dhan. Xilliga kuleylaha geedaha geedaha waa in la waraabiyaa oo la quudiyo. Daaweynta xayawaanka xilliga deyrta waxaa ka mid ah qubeyska kululaynta, nuugista nadaafadda. Xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad xakameyso xaaladda "ritoor" ee kuxirta geedka oo ka leexda barafka. Daryeelka xilliga guurka ee tubta waxay ka kooban tahay xakamaynta jirida, quudinta iyo daaweynta hababka cayayaanka.
Ma taqaanaa? Caleemaha qalalan ama cusub waxay leeyihiin saamayn bogsiin ah. Waxay sidoo kale ku jiraan ururinta shaaha.
Mid ka mid ah cudurada tubta "Stanley" - monilioz (kallana madow). Waa fungus waxayna u egtahay meel baalal ah. Wuxuu si dhakhso ah u koraa oo waxaa lagu daboolaa "fluff". Guga si ay uga hortagaan, ka hor bilowga caleemaha caleen, geedaha waa in lagu daaweeyaa fungicide. Haddii uu tubta xanuunsan yahay, waxaad u baahan tahay inaad jarjartid laanta cudurka qaba oo aad gubto.
Cayayaanka khatarta ah ee plomme waa aphid. Cayayaanka yaryar waxay waxyeeleeyaan caleemaha iyo caleemaha. Si aad uga hor tagto jacaylka geedka ee leh aphids, waxaad dhali kartaa marigolds agagaarka tubta. Waxay soo jiidanayaan ladybirds, kuwaas oo ah cadawga of aphids. Haddii uu waxyeelo daran yahay, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho sunta cayayaanka.
Plum wuxuu jecel yahay qoyaan, laakiin uma dulqaadan doono biyo joogta ah. Waraabinta u baahan tahay joogto ah - hal mar toddobaadkii subixii ama fiidkii, adoo isticmaalaya baaldi biyo ah geed kasta. Haddii xagaaga uu qalalan yahay, waxaad marar badan biyo ka cabi kartaa. Inta lagu jiro muddada miraha la sameeyay oo ay bislaadaan, waraabinta waxaa la kordhiyaa 5 jeer. Waxa ugu muhiimsan waa in ciidda waa in aysan qalajin. Si aad ujirto waa ka sii daran tahay qabow daran.
Sannadka labaad ee nolosha, dhirta xayawaanku waxay u baahan tahay inay bilowdo quudinta:
Xagaaga oo dhan, inta lagu jiro qodista, waxaad u baahan tahay inaad sameysid compost ama humus (10 kg), ku dar superphosphate (100 g) iyo sulfate potassium (100 g), HOL (30 g) iyo ash alwaax (400 g).
Saddexdii sanoba hal bacriminta isku mid ayaa loo isticmaalaa dayrta.
Sannadkii afaraad - sannadka shanaad ee nolosha, marka geedku billaabo inuu midho u dhasho, saamiga bacrimiyadu wuxuu kordho nus, marka laga reebo fosfooraska iyo nitrogen.
Mulching joogto ah oo isticmaalaya compost ama peat ka caawisaa in ay hayn qoyaan iyo difaaco koritaanka xididka.
Ka hor inta ubax samayn marxaladda xiga ee quudinta. Urea iyo potassium sulfate ayaa la soo saaray.
Inta lagu jiro daadinta ee miro la bacrimiyey leh HOL iyo nitrophoska.
Ka dib goosashada ka dhig isku dar ah superphosphate iyo cusbo potassium (30 - 40 g).
Manjooyin tayo leh iyo samaynta taajka
Geedi jaridda "derbiga" waxay ku bixisaa guga. Dhirta dabiiciga ah ayaa la isku qurxiyo si ay u dheeraato midhaha. Iska yaree laamaha qalalan, bukaanka buka iyo kuwa koraya gudaha taajka. Geedka ugu horreeya ee gabowga ayaa la sameeyaa saddex illaa afar sano kadib markii geed laga beerto. Nidaamkan waxaa la soo celiyaa afartii sanaba mar.
Geedo yar yar ee sanadka ugu horeeya ee nolosha waa la jarjarey, oo ka tagaya jir 60 cm oo dherer ah, xagaaga waxay eegayaan horumarinta geedka. Haddii qaar ka mid ah laamaha si khalad ah u koraan, xilliga dayrta waxay furfurayaan oo ka saari karaan. Sannadka labaad ee nolosha, geedo waxaa lagu xiraa 40 cm oo ku yaalla garabka weyn. U hubso inaad ka saarto kalyaha kore ee maqaarka. Dhammaan laamaha dhirta, marka laga reebo kuwa hooseeya, ayaa la soo gaabiyey saddaxaad. Caleemaha hoose waa la jaraa, dhererka dhererka qiyaastii 7cm. Sanadka saddexaad ee beerashada arooska, laamaha hoose ayaa si buuxda looga saaraa, caleemaha qalfoofka ahna waxay ka tagayaan 6 illaa 8 gooya, waxay dooranayaan kuwa ugu xooggan oo ugu caansan. Masaafada ugu fiican ee u dhaxaysa laanta waa 10 - 15cm, caleemaha haray ee aan ka badnayn afar koofi ayaa laga tegayaa. Foomka taajka ah ee qaabka looxyo. Geedka, kaas oo si sax ah loo gooyey, wuxuu leeyahay taajaji iswada leh 8 ilaa 10 laan oo waaweyn. Waxay si siman u dhexeeyaan garbaha waaweyn.
In kasta oo ay adag tahay jiilaalka wanaagsan ee qaboobaha Stanley, waxay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin dhawr ah si ay u ilaaliyaan geedka.
Wixii hoyga ee jirridda geedka isticmaal xaraf. Waxay ka ilaalisaa tubta kaliya ma aha qabow, laakiin sidoo kale jiirka, halka ay u oggolaanayso hawada iyo qoyaanka inay dhex maraan. Sidoo kale jiirka, waxaad isticmaali kartaa mesh khaas ah jiilaalka. Nidaamka asaasiga ee jiilaalka waxaa lagu daboolay lakabka mulch ka soo compost ama humus.
Bisaylkiisa midhaha ee tubta "Stanley" wuxuu dhacaa dhamaadka bisha Agoosto - bilowgii Sebtembar. Kala duwanaanshahan waa mid sareeya. Qiyaas ahaan 60 kg oo miro ah ayaa laga goyn karaa hal geed. Dalaggu si tartiib ah ayuu u raraa. Waad qaadan kartaa laba ama saddex jeer.
Si aad u miirto rajada waxaad u baahan tahay inaad doorato maalin qallalan. Miraha waxaa la goostay isla marka ay si buuxda u bislaadaan. Haddii gaadiidka la qorsheeyay, dalagga waa in la goosto shan maalmood ka hor. Plom aan la soo ururin waqtigii loogu talagalay, waxay noqdaan kuwo jilicsan, oo leh dhadhan aan fiicnayn oo ay ku dhacaan. Si aad u soo ururiso midhaha aad u baahan tahay si aad u diyaariso sanduuqyada ama dambiilaha.
Ka billow inaad soo qaadato boomaatada laga soo bilaabo dhinacyada hoose ee laanta hoose, u dhaqaaqda bartamaha. Miraha waxay u baahan yihiin in la taabto sida ugu yar ee suurtogalka ah, si aanay u tirtirin wax. Boorashka Stanley wuxuu leeyahay qoryo jilicsan, sidaa daraadeed laguma talinayo in la gooyo geedka lana jeexo laanta. Waxaa fiican in la isticmaalo jaranjarada haddii miraha ay koraan.
Ma taqaanaa? Isticmaalka joogtada ah ee xayawaanku wuxuu kor u qaadaa difaacida waxayna kordhineysaa kordhinta dhalinyarada. Waxay sidoo kale u adeegtaa si looga hortago bilawga cudurada qaaxada.
Miraha ka mid ah noocyada tubta "Stanley" cusub ayaa loo kaydiyaa qiyaastii lix maalmood oo qaboojiyaha. Si aad u kaydisid waqti dheer, waxaad isticmaali kartaa hababka soo socda:
Frost. Xajka waa in la dhaqaa oo la googooyaa bacaha gaarka ah si loogu kaydiyo raashinka qaboojiyaha. Waad sii haysan kartaa miraha ilaa toddoba bilood. Dhamaadka xilligan, plomme ma badna, laakiin si fudud u noqdaan cunno.
Canning. Laga soo bilaabo darajada "Stanley" macaanka macaanka, macaanka, jamacyada, compotes soo baxay. Iyo sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa tincture, liqueur, khamriga laga bilaabo.
Karinta cuntada. Qufacu waa in lagu hayaa xal kulul oo ah cusbo cunto oo aan ka badnayn nus saac. Ka dibna ku sii daa foorno yar oo furan saddex saacadood oo ah 50 darajo. Marka xayawaan qaboobo, waxaa la qalajiyey shan saacadood oo kale heerkul ah 70 darajo. Ka dibna afar saacadood oo kale 90 darajo. Buruunnadu waxay ku kaydsan yihiin meel qabow ah boorsooyinka warqadaha, sanduuqyada alwaaxda ah ama weelasha dhalada.
Isku day "Stanley" - Doorasho aad u fiican oo loogu talagalay dadka degaanka xagaaga. Saameynta sarreeya, adkaysiga jiilaalka, caabbinta cudurada wanaagsan - tayada ka dhigi kara in ka badan macquul.